OverTrend OSC Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha OverTrend OSC Forex Tusiyaha
OverTrend OSC Forex Tusiyaha
OverTrend OSC Forex Tusiyaha waa tilmaame oscillatory. Waxaa haboon ganacsatada intraday waa. Haddii ganacsade si cad u fahamsan yahay sida loo isticmaalo tilmaame iyo si fiican u raaco, isaga ama iyadu waxay ku xidhan tahay in ay lacag sameeyaan. Waxaa jiro taam u scalpers tan ee wakhti adag ee 30 min oo hoos ku, tilmaame uusan siin calaamadaha la hubo ee heerka dheeraad ah.
Nooca signal la siiyey kala duwan yihiin sida ay waqtiga in aad isticmaasho. Tusaale ahaan, signal iibsan la siin karaa in waqtiga H1 iyo haddii aad tagto ka 15 min cayiman, waxaad ka heli tilmaame muujinaya signal iibiyay a. Tani waa sababta ay arrimuhu qiimaha suuqa ku xiran tahay xiliga cayiman ayaa in aad isticmaasho inkastoo mararka qaar waxaa ka mid ah in dhammaan wakhti noqon kartaa. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaasho waqtiga D1 ee arrimuhu waa ka badan xididaysan waana jihada of qiimaha sida maalin kasta. Laakiin hal maalin gudahood, arrimuhu ay u guureen waxaa laga yaabaa in kor, hoos, ka dibna kor iyo hoos markaas oo la si fiican loo arki lahaa marka wakhti hoose waxaa loo isticmaalaa.
shaqo ayaa ka mid ah tilmaame OverTrend OSC.
The tilmaame OverTrend-OSC wuxuu ka kooban yahay baararka in lagu baayici karo oo ku saabsan dhexdhexaad ah line eber /. Waxa kale oo jira line madow in soo socota sare oo ulihiina wuxuu ku ahbaa iyo sidaas lagu baayici karo oo ku saabsan heerka eber. gudban ahbaa jira by default afar midabo kala duwan oo ka mid ah buluug, DeepSkyBlue, Coral, iyo kuwo gaduud. The buluug iyo DeepSkyBlue waxaa lagu soo bandhigaa heer ka sarreeya eber halka cas iyo shacaab waxaa lagu soo bandhigay ka hooseyso heerka eber.
lagugu tuday sawirka.1. The tilmaame OverTrend OSC sharaxay.
baararka ugu weyn in waa in walaac in ganacsade ah waa buluug, iyo ulihiisa gudban cas. Labadan ulihiisa gudban yihiin calaamadaha ee iibsashada iyo iibinta siday u kala horreeyaan. The baararka buluug muujinaysaa kor u joogto ah qiimaha suuqa halka qataarrada cas waxay muujinaysaa hoos u dhac joogto ah ee qiimaha suuqa.
Haddii aad eegto si dhow in ay ulaha gudban in ay yihiin ee ay tilmaanta, waxaad arki doontaa in bar kasta oo soo socota laambad gaar ah shaxda ugu weyn ee ganacsiga. bar A cas waxaa la aasaasay markii laambadda on shaxda ugu weyn waa orso laambadda. bar A shacaab ahbaa markii laambadda sameeyay shaxda ugu weyn waa retracement a (kor u yar oo ah qiimaha suuqa, ka dib markii a dayrta hoos u qiimaha yaacday). bar A buluug ahbaa markii laambadda dibi la aasaasay. bar A DeepSkyBlue ahbaa markii retracement yar dhacdaa on qiimaha suuqa.
Dhererka ulood oo aan la xalin. Waxaa kala duwan taas oo ku xiran of laambadihii la aasaasay. Haddii aad eegto si dhow, waxaad arki doontaa in a shumac labaad buluug ah waxaa la aasaasay kaliya marka laambadda sameeyay waa laambaddii dibi.
Isticmaalka tilmaame OverTrend OSC in meel iyo amar ku dhow.
Amarada waa in lagu rakibaa oo keliya haddii gudban ee ay tilmaanta waa buluug ah ama kuwa gaduudan.
Marka tilmaanta abuuraa bar buluug ah, markaas ganacsade ah waa meel si iibsan a. Marka tilmaanta abuuraa bar cas, ganacsatada ay tahay in ay si iibiyay a.
Waa inaad isticmaashaa joogsato ganacsi kasta oo aad meel u. faa'iido qaadataan The waa in lagu rakibaa 150 dhibic (15 Liiska Forbes) foomka amarka halka khasaare joogsiga waa in lagu rakibaa 200 Liiska Forbes (20 Liiska Forbes).
Fig.2. gelinayn amarada la isticmaalayo Tilmaame OverTrend OSC sharaxay.
Sida ganacsade ah, Waa in aad meel si kale marka ganacsiga ee hadda jira ayaa weli ma xiran.
OverTrend OSC Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
OverTrend OSC Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo OverTrend OSC Forex Indicator.mq4?
Copy OverTrend OSC Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha OverTrend OSC Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar OverTrend OSC Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousTaxadirayo Forex Tusiyaha
Next articleDirection Forex Tusiyaha